June 2012 - Page 5 of 6 - iftineducation.com
Moh Faarax iftineducation.com – Cayaaryahanka Soomaaliga ah ee orordka, Maxamed Faraxa oo heysta dhalashada Britain ayaa xalay ku guulaysatay orodka 5-ta kun ee tartanka Prefontaine Classic in Eugene ee lagu qabto dalka Mareykanka. Moh farah oo da’diisa ay tahay 29-sano ayaa ku oraday 12 daqiiqo iyo 56.98 ilbiriqsi, isagoo ka horumaray Kenenisa Bekele oo u ordayay Ethiopia iyo Isaiah…
Galaxy S III Vs iPhone 4S iftineducation.com -Ponsel kan cusub Samsung ee Glaxy S III, oo wali ku cusub suuqyada caalamka ayaa latijaaiyay awoodiisa ayadoo laga ridaayo istaaga. Jab-Jab ma ukala dhici doonaa mase sidiisa ayuu isku heysan doonaa una shaqeyn doonaa? Website kaan falaqeeyo arima technology ga ee Android Authority ee laga leeyahay ingiriska ayaa wuxuu sameeyay tijaabo adkeysiga…
Justin Bieber Oslo Norway iftineducation.com – Fanaanka u dhashay dalka Canada ee Justin Bieber ayaa waxaa uu xaflad bilaash aheyd ku qabtay Operada Oslo Norway waxaana kasoo qeybgalay taageeryaashiisa Norway oo u badnaa gabdho da’doo ka yartahay 20 ka ayagoo isla markii uu soo koray masraxa wada ilmeeyay. Waxey ku cabaadayeen baby Baby oo aheyd midka mid ah heesaha uu…
Ikraan Caraale iyo Saxardiid Maxamed Saxardiid (SMS) iftineducation.com – Fanaanadda Ikraan Caraale oo dhawaan magaalada Hargeysa ku guursatay fanaanka Saxardiid Maxamed Saxardiid (SMS) ayaa waxey hambalyo ka heleen dhamaan taageerayaashooda waxeeyna bahda iftineducation.com sidoo kale leedahay isku waara. Hadaba Arooskaan oo ahaa mid si weyn loo habeeyay ayaa waxaa nasoo gaaray qaar ka mid ah sawirada arooska iyadoo ay Lamaanahana…
Elman VS Badbaado iftineducation.com – Waxaa galabta furmay horyaalka 37 ee `wadankeena soomaaliya kaas oo ka furmay magalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ugu horeeyn waxaa lagu furay kooxda elman oo difacaneysa koobka iyo waliba kooxda kale ee Badbaaado. Ciyaarta waxaa waxeey ka dhacday goornka jaamacadaha ee magalada muqdisho waxaan ciyaarta ka soo qeyb galay dad aad ufarabadan kuwaas oo…
iftineducation.com – Fanaaniinta Da’da yar ee fanka kusoo biiray inta u dhexeyso 2000 ilaa 2012 ayaa la sheegay in ay ogolaansho ka heleen hooyooyinka iyo aabayaasha dhalay fanaaniintaasi balse uu ahaa hishiiska in aan la xusin magaca saxda ah ee aabahaasi dhalay fanaanka heesaha ku luqeynaayo. Fanaanka ayaa ah mid la baxa magac ka duwan magaciisa saxda ah oo ay ula…
Akshay iyo kereena iftineducation.com – Filimka laga magac baxay Faltu ayaa waxa uu noqon donaa mid ay ku kulmaan in ka badan 30 jilaa oo ka mid ah Bollywoodka. Filimkan ayaa duubistiisa la bilaawi donaa todobaadyada soo socda waxaana jilaaga koowaad ka ah xiddiga Bollywoodka ee Akshay kumar iyadoo filimka uu ka dhex muuqan doono rugcadaaga Bollwyoodka Amitabh Bachchan (Cali…
iftineducation.com – Madaxda iyo dadka Poland ayaa waxaa la sheegay inay caro weyn ka muujiyeen hadal ka soo yeeray madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama iyadoona ay ka codsadeen madaxdaasi inuu madaxweyne Barack Obama uu hadalkaas sida ugu dhaqsaha badan uu raali galin buuxda uga bixiyaa. Madxweyne Barack Obama oo dhawaantaan ka hadlaayey munaasabad lagu xusaayey islamarkaana abaal marin bilaladeed lagu siinaayey…
Madaxda DKMG iftineducation.com – Waxa 30 May 2012 uu Bangiga Aduunku u qaybiyay wufuudii shirka Istanbul warbixin tafaftiran oo ku qoran 18 bog, oo ka hadlaysa lacagta soo gashay dowladda KMG sanadihii 2009-2010 iyo sida ay u qarash gareysay Dowladdu. Warbixinta oo kooban ayaan Af-Soomaali ku tarjunay, iyadoo Ingiriis ahna hoos ayaan ku lifaaqi doonaa. Madaxda hoos ku qoran ayay warbixintu…
iftineducation.com – Madaxweynihii hore ee dalka Soomaalia Dr C/Qasim Salaad Xasan ayaa waxaa uu soo dhaweeyay natiijada shirkii magaaladda Istanbul ee beesha caalamka ay kaga dooday xaaladda Soomaaliya. Waraysi dheer oo uu bixiyay ayaa Dr C.Qasim waxaa uu sheegay in hadda loo soo jeestay xaaladda Soomaaliya laakiin dadka Soomaalida ah looga baahan yahay in ay ilgooni ah isaga eegaan nooca dowlada…